Pique; “Waxaan rajaynayaa inaa maalin maalmaha ka mid ah Guddoomiye u noqdo kooxda Barcelona” – Gool FM
Pique; “Waxaan rajaynayaa inaa maalin maalmaha ka mid ah Guddoomiye u noqdo kooxda Barcelona”
(Barcelona), 15 Okt 2016 –Daafaca kooxda Barcelona iyo xulka Qaranka Waddanka Spain Gerard Pique ayaa shaaca ka qaaday in mustaqbalka marka uu ciyaaraha ka fariisto uusan rajayneynin inuu Tababare u noqdo Barcelona balse taa beddelkeeda uu doonayo in uu Guddoomiye ka noqdo naadigaasi.
Wareysi uu Pique siiyay ‘TV3 Catalunya’ ayaa waxa uu yiri “Jagada tababarenimo, maya taa ma doonayo maxaa yeelay taa ima farxad gelinayso, laakiin Kursiga Guddoomiyenimo, haa waxaan awoodayaa markaas inaan waxyaabo badan u qabto Barcelona, taasoo aakhirkana i farxad gelinaysa”.
Pique oo 29 jir ah ayaa xusay in waqtigiisa ciyaaraha kubadda cagta uu gababaabsi sii marayo, marxaladda xigtana uu jecel yahay inuu Guddoomiye u noqdo kooxda Barcelona, waxaana Guddoomiyaha kooxdaasi Catalunya 6 sanaba mar soo doorta Taageerayaasha iyo Saamileyda naadigaas.
Mar uu ka hadlayay gooni isu taag jeceylka gobolka Catalunya ee uu doonayo inuu kaga go’o Spain inteeda kale ayaa waxaa Pique uu yiri “Xaq ayay u leeyihiin, aad ayaana u waafaqsanahay in ay Masiirkooda doortaan, waxaan u dagaallami doonaa arrimaha aan aaminsanahay, dhowr jeerna waan sameeyay oo waan ka qayb galay mudaaharaadyo ay ku doonayeen gooni u goosad”.
Ciyaaryahan Pique oo xulka Spain u ciyaaraya tan iyo 2009 ayaa dhowaan shaaca ka qaaday in wixii ka dambeeya Koobka Adduunka 2018 uu ciyaaraha caalami isaga fariisan doono.
EPL: Kooxda Arsenal oo guul ka gaaray Swansea City, iyadoo kaarka cas laga qaatay… + SAWIRRO